uBlock, safidy maivana ary maivana ho an'ny adBlock Plus | Avy amin'ny Linux
uBlock, safidy maivana ary maivana ho an'ny adBlock Plus
1 Inona ny uBlock?
2 Fampisehoana UBlock
2.2 Unité centrale
3 Fametrahana UBlock
Inona ny uBlock?
uBlock Tsy mpandàla doka fotsiny izany; sakana amin'ny ankapobeny izany. Manakana ny doka izy satria manohana ny syntax sivana Adblock Plus, fa manitatra izany syntax izany ary natao hiara-miasa amin'ny sivana sy fitsipika manokana. Raha ny filazan'ireo mpamorona azy dia mamela CPU sy hazavana fahatsiarovan-tena izy ary, na eo aza izany, afaka mamaky sy manery ny sivana an'arivony ampiasain'ny mpanakan-dàlana malaza hafa, toa ny AdBlock Plus (ABP) na Ghostery. Ireo lisitra ireo dia misy EasyList, EasyPrivacy, Malware Domains, sy ny hafa mamela anao hanakana ireo mpanara-dia, widgets sosialy, ary maro hafa. Izy io koa dia mitondra fanampiana ho an'ireo rakitra mpampiantrano ary ahafahanao manampy loharano hafa, ho fanampin'ireo izay avy "avy amin'ny orinasa".
uBlock dia miasa amin'ny Chromium / Chrome sy Firefox ary, tsy toy ny Ghostery, no zaraina amin'ny Lisansa GPLv3, fanaovana azy ho fitaovana free software. Na dia tena mahomby aza ny Ghostery, tsy vitan'ny hoe tsy rindrambaiko maimaimpoana izany fa misy ahiahy lehibe fa amin'ny alàlan'ny lahasa "GhostRank" dia mivarotra data momba ireo doka voasakana amin'ireo orinasan-doka mihitsy. Manoro hevitra anao aho hanandrana fomba hafa maimaim-poana, toa ny elektrônika o uBlock. Teboka iray hafa tsy tokony hotadidina dia ny uBlock - ary koa ny ABP, AdGuard, ary ny sasany hafa- mamela ny mpampiasa hiditra ny sivan'izy ireo manokana, zavatra iray izay tsy azo atao amin'ny Ghostery na Disconnect.
Tamin'ny zavatra niainako, hatramin'ny nampiasako uBlock, ny hafainganam-pandehan'ny fitetezana dia nanao dingana lehibe tokoa. Ary koa, ny tranonkala dia toa "madio" kokoa ary tsy misy atiny be loatra hanakorontanana ahy. Toy ny hoe tsy ampy izany, tsy toy ny Adblock Plus (ABP), uBlock dia mampiasa loharano vitsy kokoa. Ireto misy tabilao fampitahana hanaporofoana izany.
Fanadihadiana ampitahaina amin'ny fanjifana fahatsiarovana ao amin'ny Chromium
Fanadihadiana ampitahaina amin'ny fanjifana fahatsiarovana ao amin'ny Firefox
Satria tsy mailaka sy mahomby uBlock dia tsy midika izany sakana kely mpanaraka.
Raha ny fahitako azy dia mila fampitandremana fohy ity teboka ity. uBlock dia tsy manakana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny widgets Facebook, Twitter, Google+ sns. manakana ireo fanitarana hafa. Mba hanaovana izany dia mila manetsika ny sivana avy amin'ny antoko fahatelo ianao (izay efa misy ao amin'ny uBlock), toy ny Anti-ThirdpartySocial na ny Fanboy's Listing Blocking List. Na izany na tsy izany, tsy maintsy milalao miaraka amin'ireo lisitra ianao mandra-pahitanao ny fandanjana tadiavinao. Safidy iray hafa, somary sarotra kokoa, ny mamela ireo safidy mandroso sy napetraka fitsipika sivana mavitrika.
Tsotra be ny fametrahana, mila apetrakao fotsiny ny fanitarana mifanaraka amin'ny tranokala ampiasainao.
Sintomy ny extension uBlock ho an'ny Firefox
Sintomy ny fanitarana uBlock ho an'ny Chromium / Chrome
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » uBlock, safidy maivana ary maivana ho an'ny adBlock Plus
Misaotra betsaka fa hanandrana aho. Tena miadana be ny Firefox-ko.
Nampiasako azy hatramin'ny nivoahany tao amin'ny Firefox, saika tsy mandany na inona na inona ary tena mandeha tsara.
Azonao atao ny manaraka ny fivoaran'ny mpanoratra tany am-boalohany amin'ny siny vitany:
uBlock Origin, ny fanitarana ao amin'ny Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
Azonao atao ny mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny fork, eo anelanelan'ny hevitra na ny extensions, ary amin'ny wikipedia:
Ho tsara sahady, fa ahoana ny fampitahana ny fampisehoana amin'ny hosty sy fanovana / sns / mpampiantrano? Ity script ity dia tsara, na dia tsy mamafa ny iframes fanaovana dokambarotra aza izy io, ka nahatonga ny lesoka 404 voamarika.
@jorgicio nampiasa vahaolana toy ilay nolazainao aho, mpanova / sns / nampiantrano miaraka amin'ny userContent.css hialana amin'ny iframes sy ny doka hafa amin'ny doka voasakana ao amin'ilay pejy. Azo antoka fa manatsara ny fahombiazan'ny Firefox ny fanaovana zavatra toa an'io. Eto amin'ny FromLinux dia mamoaka safidy hafa tena tsara, toy ny https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ ary nampiseho ny fihatsaran'ny fivoaran'ny Firefox teo ambanin'io fikirakirana io, akaiky ny an'ny mpampiasaContent.css sy / sns / mpampiantrano.
Saingy azoko lazaina aminao amin'ny antoka tokoa fa tena tsara ny uBlock, manana vakira 21 misokatra ao amin'ny Firefox aho izao, console telo, vim ary geany misokatra ary fanjifana 681 Mb Ram, tsy dia tena ratsy.
Nahavita nahita an'io aho, ary ankasitrahana izany. Manantena aho fa misy ho an'ny mpizaha hafa hafa, toa ny Opera 😀
Amin'izao fotoana izao dia hijanona miaraka amin'ny ublock aho hahitako ny fandehany 😀
Mamaly ny tenako aho: Eny misy xD
Fandraisana anjara tsara @usemoslinux, avy amin'ny safidy kely fantatra nefa mahery. Elaela aho hatramin'ny nijanonako tamin'ny fampiasana ABP ho an'ny script hanovana / sns / mpampiantrano mampiasa andiana lisitra tena tsara, miampy mpampiasaContent.css novaina mba hanafoanana ny toerana fotsy. Mety hamoaka doka sasany ity, saingy nahagaga ny fanatsarana ny zava-bitan'i Firefox.
Avy eo hitako io fanitarana io rehefa nanatsara ny script ho an'ny / etc / host, nanapa-kevitra ny hanandrana aho ary tsy maintsy milaza aho fa gaga be aho, mitazona ny haavon'ny fampisehoana mitovy amin'ny UserContent.css ary manatsara ny fanakanana doka, ary koa ny fanovana mora amin'ny whitelist na manampy singa vaovao, tena tsara.
Tokony hazavaina fa misy "uBlocks" roa. Ilay nanolotra rohy ao amin'ilay naoty dia ilay iray ampiasako ihany, ny "Origin" izay fitohizan'ny mpamorona tany am-boalohany ho an'ny tetikasany, taorian'ny nanolorany ny mpandraharaha iray hafa ny andraikitra hitana ny sampana lehibe an'ny uBlock tetikasa.
Betsaka ny zavatra hafahafa ao, satria amin'ny lafiny iray, ny mpamorona tany am-boalohany dia naka fork an'ny tetik'asa natokana ho azy ary nanatsara azy ary mitazona izany tsara. Ireo mpikirakira hafa dia niditra amina adihevitra be momba ny olana maro samihafa, ary nanjary tsy tian'ny mpampiasa mpisakana maro.
Raha fintinina, mitandrema rehefa misafidy izy ireo. uBlock Origin no tokony hampiasain'izy ireo, araka ny soso-kevitra ao amin'ilay naoty. Mampiasà azy io saika hatramin'ny andro nivoahan'ny siny ary tsy nisy olana.
Ho fanampin'izany, mampiasa ny Badger momba ny fiainana manokana aho mba hialana amin'ny fanarahana sy ny fanarahana izay nomen'i Ghostery ahy, izay najanoko tamin'ny fampiasana ireo antony voalaza etsy ambony ireo ihany.
Seba dia hoy izy:
Ao amin'ny naoty amin'ny chrome no niandohany, fa ny firefox no xD hafa
izany no niandohan'ny firefox.
Mamaly an'i Seba
Misaotra tamin'ny fanazavana. Araka ny nolazaiko tamina fanehoankevitra hafa, tamin'ny fotoana nanoratako ilay lahatsoratra dia tsy fantatro ny fisian'ny ublock sy ny ublock ho tetikasa misaraka. Na ahoana na ahoana, izao ny rohy rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity dia manondro ny fanitarana fiaviana uBlock, izay ireo no tohanan'ny mpanoratra voalohany.
weightmetalmixer dia hoy izy:
Ho ahy, tsy maninona ny doka, fa manelingelina ahy ny fanarahana. Azonao atao ve ny milaza ny fampiasana Privacy Badger miaraka amin'ny Disconnect? Sa zavatra hafa?
Mamaly an'i heavymetalmixer
Salama, mampiasa Privacy Badger aho ary tena tiako ny fomba fiasany mba hanakanana ny fanarahan-dia.
Araka ny voalaza dia tsy loharano misokatra ny Ghostery ary betsaka ny ahiahy manakana azy io rehefa mandefa data amin'ny orinasa.
Amin'ny tranga Disconnect dia nampiasaiko nandritra ny fotoana kelikely aho ary niasa nitovy tamin'ny Ghostery. Manana ny lisitry ny mpanara-dia izay sakanany ary manavao hatrany. Tsy azoko antoka hoe loharano misokatra na tsia izy io, saingy najanoko ny fampiasana azy satria tsy naharesy lahatra ahy ary i Ghostery dia niasa tsara kokoa.
Ankehitriny, satria mila zavatra Open source aho dia nitady ka nahita ny Badger momba ny fiainana manokana. Manazava aho fa tsy mitovy amin'ny an'ny 2 teo aloha. Amin'ny alàlan'ny default dia tsy manakana izy io fa mianatra rehefa mampiasa azy ianao ary mivezivezy izay mpanaraka no manakana na tsia.
Raha liana kokoa amin'ny fampiasana ianao (noho ny antony fiarovana tsy hialanao averina indroa) ny Source Open rehetra dia tokony ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra ny Privacy Badger. Ary ampiasao irery, miaraka amin'ny Disconnect sy Ghostery manao toy izany koa.
Miaraka amin'ny paositra miasa foana, misaotra an'i Pablo.
Nanatsara ny zava-bitako tao amin'ny Firefox indroa izy io.
Ankoatr'izay, ny rakitra mpampiantrano ao amin'ny winXP sy amin'ny Linux dia mitovy be, saika mitovy
Nohavaozinao eto: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Miaraka amin'ny torolàlana ho an'ny Windows sy Linux dia tsy ilaina izany fa mba tsy hisian'ny fisalasalana.
Paulo Zuniga dia hoy izy:
Misaotra amin'ny vaovao. Vao avy nivadika adblock aho dia izao no gaga. Izy io dia miasa 100% amin'ny safari.
Mamaly an'i Paulo Zúñiga
wow, misaotra betsaka anao nanolotra ity add-on ity.
Tao amin'ny solosainako no nampiasako ny ABE, fa rehefa nivoaka ny safidin'ny dingana maro an'ny Firefox Dev dia nijanona tsy niasa intsony ka aleoko nijanona tsy nampiasa fizotra marobe ... saingy toa mandeha tsara io ... 🙂
Andriamatoa Paquito dia hoy izy:
Nampiasa Adblock Plus efa ela aho.
Nametraka uBlock Origin aho ary toa manatsara kely izany, indrindra amin'ny solosaina findainy, izay efa taona. Tsy dia hitako loatra ny latabatra aorian'ny sakafo hariva.
Ny zavatra ananako dia zavatra misavoritaka amin'ny anarana mitovy be dia be uBlock, uBlock Origin, µBlock ...
Napetrako ny uBlock Origin, fa ny tena marina dia tsy nanana hevitra aho hoe iza no tsara hapetraka.
Namaky tamin'ny fanehoan-kevitra notoroan'i Sergio S ny uBlock Origin aho, saingy namaky tranokala izay anoloran'izy ireo µBlock ary koa uBlock, na dia misy aza ny fanondroan-kevitra manjavozavo miresaka zavatra iray ary mametraka rohy mankany amin'ny iray hafa, raha ny marina, ity lahatsoratra ity ihany dia mampifandray anao amin'ny uBlock mankany Firefox ary uBlock Origin ho an'ny Chrome.
Izaho, ankoatry ny fandraketana ny korontana dia tsy hitako izay fandehan'ny anarana mitovy amin'izany, fa raha misy olona afaka mametraka baiko kely ary manazava kely an'io dia hankasitrahako izany.
Misaotra, na ahoana na ahoana.
Valiny tamin'i Señor Paquito
Ny marina dia tamin'ny fotoana nanoratako ity lahatsoratra ity dia tsy fantatro ny fisian'ny uBlock sy ny uBlock. Na izany na tsy izany, raha te haharitra aho dia nanitsy ireo rohy fotsiny aho mba hanondroan'izy rehetra ny fiavian'i uBlock.
Tena tsara izany, raha ny amiko dia tsy mila asa be loatra aho ary mampiasa Bluehell ary tena mety amiko izany.
Satria hitako fa misy ublock misy ao amin'ny Firefox dia hampiasaiko izy io. Vaovao tsara ny fahalalana izany. Amin'ny alàlan'ny fandefasako ny ABE hisidina satria manome ahy fihetsika manelingelina izany satria mametraka zavatra tsy misy alalana amiko, indrindra hita amin'ny solosainan'ny sakaizako. Ary nametraka azy aho mieritreritra fa tsara kokoa uu
Eny, misaotra tamin'ny fanamarihana. Tena tiako ilay izy 🙂
Ny lahatsoratra manazava ny fikirakirana tsara indrindra dia ho tsara, ka ny fanitarana dia manana ny fiasan'ny Adblock, ary Ghostery. Ho fanampin'izay, te-hanontany aho raha misy mahalala ny DoNotTrackMe antsoina ankehitriny hoe Blur ary inona no eritreritrao raha azo antoka izany?
Tsy maintsy manandrana azy aho fa tsy ny Adbloc amin'ny solosaina ananako miaraka amin'i Xubuntu izay tsy misy afa-tsy memoara 1 Mb. Firefox no ampiasaiko ary indraindray miadana be izy io ary saika hianjera satria, amin'izao fotoana izao, misy pejin-tranonkala sasany mametraka script be dia be ka tsy misy fomba fitetezana.
Mamaly an'i Jvare
Endrey ny mahafinaritra fa misy ny mpanakana doka, indraindray ny dokam-barotra ihany fa tsy misy atiny napetraka 🙁
ER KUNFÚ NY TRIANA dia hoy izy:
TSY manakana ny dokam-barotra rehetra izany, farafaharatsiny amin'ny mailaka yahoo. Raha manana mailaka yahoo ianao dia ampidiro ny boaty fampidiranao ary jereo fa ambonin'ilay hafatra voalohany voaray fotsiny dia misy boaty iray izay, indraindray dia miseho ny dokam-barotra. Namboariko tamin'ny fomba an'arivony ireo sivana ary mitohy miseho indraindray ny boaty miaraka amin'ny doka mahafinaritra, farafaharatsiny tsy haiko ny manala azy.
Valiny amin'i ER KUNFÚ DE TRIANA
jabelse dia hoy izy:
ublock dia miasa tsara amin'ny chroium LMDE betsy
misaotra amin'ny lahatsoratra
Mamaly an'i jabelse
Tsara tokoa, misaotra nizara
nyoroxuggk dia hoy izy:
Mamaly an'i nyoroxuggk
Alfredo Bohorquez dia hoy izy:
Nolazaiko taminao ny momba ny olana iray nipoitra. Nampiasa fitaovana fanakanana doka aho, amin'izao fotoana izao adblockefa ela no nisy ary hafahafa amiko fa rehefa mandeha ny fotoana dia lasa tsy dia ilaina intsony izy ireo. Ny zavatra lojika dia ny mifanohitra amin'izay, satria tonga lafatra izy ireo raha ny amin'ny fanakanana ny atin'ny dokam-barotra fa ny tranokala maro kokoa no misy, manana ny blocker anananao ianao, na mihinana dokam-barotra ianao na manery anao hamerina ny pejy amin'ny alàlan'ny fanalana azy io satria hitany ny sakana. Te hanontany aho raha fantatrao fa misy fitaovana tena mandaitra anio hanakanana ny dokam-barotra. Misaotra anao!
Valiny tamin'i Alfredo Bohórquez
Remix Mini: ilay tetikasa mikendry ny hitondra Android amin'ny PC amin'ny fomba voafaritra tsara